Kana iwe uchitamba mitambo yemavhidhiyo paPC, mukana wakambonzwa zvose nezve 144Hz uye 240Hz vatariri. Kana iwe wakashandisa mureza we 60Hz wehupenyu hwako hwose kusvika ikozvino, zvingava zvakaoma kuziva kana kutamira ku144Hz kana 240Hz kuchava pfungwa yakanaka kana kwete.
Muchikamu chino, takaratidza kusiyana kukuru pakati pe60Hz, 144Hz, uye 240Hz uye tapa mazano pazvinenge zvakanaka kuti uvandudze. Kune avo vari kuchengetedza vatariri ava kuti vawane nguva yemberi, iva nechokwadi chekutarisa 144Hz Vatariri uye GamingScan nekuda kwenhau dzezvino.
60Hz vs 144Hz vs 240Hz Vatariri - Chii chakasiyana?
Izwi rokuti 'HZ' rinoshandiswa mukutsanangurwa kwekutsvaga rinoshandiswa kurondedzera kuburitsa kwayo. Iyo yakakwirira yeHz, iyo inowanzowanzogadzirwa. Somuenzaniso, mutambo we 60Hz uchavandudza mufananidzo wayo 60 kaviri pamusi wechipiri, apo mutsara we 144Hz uchatsvaga mufananidzo wayo 144 nguva imwe nechipiri.
Asi izvi zvinorevei kune kushandiswa kwenyika kwechokwadi?
Chaizvoizvo, imwe yepamusoro yekuvandudza ichareva kuti chifananidzo chaunoona chinovandudzwa nokukurumidza. Izvi zvinogona kubatsira zvikuru pamitambo yekuita kana pamakwikwi emakwikwi umo millisecond imwe neimwe inoverenga.
Nhamba yezororo inoshandisa zvakafanana kuti mapuranga neechipiri mubhidhiyo yemutambo wevhidhiyo, asi pane kusiyana.
Mafaira pamushure wechipiri anotsanangura kuti zvikamu zvakadini zvakashandurwa pamakadhi ako e-graphics pamusi wechipiri, asi chengetedzo yekuvandudza tsananguro inotsanangura kuti kazhinji sei mufananidzo wako uri kunyatsogadziriswa paunoona.
Saka, kana iwe uine 300 mafaira kwechipiri mumutambo asi shandisa mumiriri we 60Hz, izvo zvinoratidzwa kwauri zvichange zvine nguva 5 shoma 'zvirongwa' zvisingagoni kuitika.
Nokuda kwechikonzero ichi, kutamira kune imwe mutsara wepamusoro nehuwandu hwekuvandudza huwandu hahukoshi iyo kunze kwekuti kadhi yako yemagadhi inogona kutendeseka mumapuranga e60 kana kupfuura. Iwe unogona nyore nyore chengetedza mapurimi nechipiri pamutambo pane yako shandisa uchishandisa zvakasiyana siyana.
Vamwe vanhu vanotaura kuti ziso rinogona kungoona kune imwe nhamba yemapuranga pamusi wechipiri. Ichi hachisi chokwadi chega uye chave chave chichinyorwa sedhema. Maziso edu haashandisi zvakafanana nenzira dzinoonekwa, saka zvakaoma kuverenga kuti 'mafaira' akawanda sei pachipiri tinogona kuona.
Zvatinoziva ndezvokuti avo vakashandisa 144Hz vatariri vanogona kubvumirana kuti vanogona kuona nekuona mutsauko pavanotamba mitambo.
Ichokwadi, musiyano unozivikanwa zvikuru apo musikana we144Hz anoenda kuratidzwa kwe 60Hz - vazhinji vanoramba vachiratidza 144Hz vashandisi vanotaura kuti vanogona kuona zvose kubva pamitambo yevhidhiyo kusvika kumhanyi yevhurairi padesktop yavo vanonzwa vasina usimbe pavanodzokera ku60Hz.
Chimwe chinhu chakakosha kuchengeta mupfungwa ndeyekuti teknolojia yekuratidzira iyo inowanzoshandiswa pakukwirira kwekuvandudza kutarisa kwekutarisa haisi iyo nzira yakanakisisa yehuwandu hwekuratidza unhu uye kururamisa kwemavara.
Kana iwe uchitarisa nezvehutarisiro, enda kwepamusoro yepamusoro 60Hz monitor. Kana iwe unofarira nezvekushanda, purogiramu yemutengo, uye kuwana kukwikwidzana kwekwikwidzi, iwe unofanirwa kuenda kune yepamusoro yekuvandudza mutengo wekutarisa.
Kana iwe uchida zvose zviri zviviri mune chimwe chekuongorora, iva wakagadzirira kubhadhara mutengo mukuru. Yatsva Acer Predator X27 kuongorora kune zvinhu zvose zvakakwirira-zvakagadziriswa: 4K resolution, Nvidia G-sync, 144hz mutsara wokuvandudza, HDR, 1000 nitshino yekubwinya, nezvimwe, asi inotora $ OFF $ 2K ikozvino. The Asus ROG Swift PG27UQ yakafanana yakagadzirirwa uye yakafanana yakatengwa.
Unofanira Kuvandudza Kubva 60Hz kusvika 144Hz?
Tiri kutosvika pane imwe nzvimbo apo zviri nyore chaizvo kutenga kana kuvaka kombiyuta inokwanisa kukwanisa kuendesa 120 kana fps kana zvimwe mumutambo wemavhidhiyo. Mukati, mimwe mitambo yemutambo inowanika paPC inogona kugadzirirwa kusvika kumapuranga e300 pamushure pamagetsi ekupedzisira.
Kana uchikwanisa kunyatsotamba mitambo yaunotamba pane zvinopfuura 120 mafaira pamasekondi, ipapo kuvandudza ku144Hz kunokosha, asi inofanira kungofungidzirwa sarudzo kana iwe unofarira nezvekuvandudza kushanda.
144Hz vatariri vanoshandiswa kakawanda mumitambo yakafanana neCompter Strike: Global Offensive kana League of Legends iyo imwe nhengo yepamusoro uye micromovement inobata chimwe chinhu.
Heino tarisiro yekufungisisa usati wavandudza:
● Unoda kukwikwidzana
● Iwe hausi kufunga kukanganisa ruvara rwekwangwani kana kuratidza unhu mumafirimu nemitambo yekushanda zviri nani
● Kombiyuta yako inogona kukwanisa kutamba mitambo pamapuranga e100 kana kupfuura.
Zviri pachena, iyo yakasarudzwa nekugadzirisa kwekutarisa kwako, iyo nyuchi yekodhi kadhi kadi iwe unoda kuwana iyo yakakwirira yemafreyimi. Parizvino, hapana kadhi kadiki inogona kuputika pa 60 fps pane 4K monitor ne ultra settings. Iwe unotofanira kumirira kusvikira makadhi matsva emuNVIDIA GTX 11xx achibuda pamagumo e2018.
Kunyange zvakadaro, iwe unogona kuzadza-uchapupu hwako kutenga kwako nekuwana gadziriro inogona kukwirira yakakwirira mashizha kuitira kuti kutamba kwako kubatsire zvikuru kana iwe ukasarudza kuvandudza kadhi yako yekadhi gare gare.
Unofanira Kuvandudza kubva ku144Hz kusvika ku240Hz?
240Hz vatariri vatsva zvikuru kupfuura vatariri ve 144Hz, asi vari kutanga kuva vakawanda.
Kubvumirana kukuru kwevatariri ve 240Hz kunoratidzika kuti kana kombiyuta yako inogona kutendeseka zvigadziri zve 240 mumutambo, inogona kuva yakakosha yekuvandudza. Izvi zvakakodzera chete ku1920 × 1080 vatariri panguva ino. Ichava nguva yakareba usati waona 240hz 4K vatariri.
Mhinduro dzakawanda dzevatengi nemishumo pavanotarisa 240Hz dzinoratidza kuti kuvandudzwa kubva ku144Hz kusvika ku240Hz hakuiti zvakakonzera izvozvi zvakakwira mukushanda kunobva ku60Hz kusvika ku144Hz, asi pane kusiyana kunooneka.
Zvakakoshawo kuziva kuti kune vamwe vatariri vane 200Hz yekurudziro yepamusoro iyo ine mazano akareba sa2560 × 1080 kana 3440 × 1440 (ultrawide). Mimwe mienzaniso inosanganisira iyo Acer Predator x35 uye Asus ROG Swift PG35VQ. Haana kusunungurwa zvakadaro.
Takapa urongwa huri pasi apa kuti tibatsire kusarudza kana kuvandudza ku240Hz kwakakodzera here:
● Unokwikwidza mumitambo yemavhidhiyo pakakwirira
● Unoda mhedziso yakanakisa iwe unogona kupikisana nevamwe vatambi
● Kombiyuta yako inogona kutamba mitambo yaunotamba nayo pamakwikwi kana 240
● Iwe haufaniri kubhadhara mari yakawanda nokuda kwekuongorora uye unoziva kuti mutengo wevatariri ve 240Hz unogona kudonha sezvo teknolojia inowanzozivikanwa
Iyo inoputira kuenzanisa kwedu pa 60Hz, 144Hz, uye 240Hz vatariri. Ndezvipi zvaunofunga? Iwe unenge uchivandudza kutarisa kwako chero nguva nguva pfupi here? Enjoy!
The post 60Hz vs 144Hz vs 240Hz Vatariri - Kana Iyo Inoita Kuti Uvandudze yakatanga kutanga Online Tech Tips.
Samsung Galaxy S22 + uye S22 Ultra yekuzorodza mwero yakatsanangurwa